Movies – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Trollhunters: Rise of the Titans (2021) Unicode အခုလက်ရှိလူကြိုက်များနေတဲ့ Animation Movie လေးပါ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက သက်ရှိအားလုံး ညီညီမျှမျှ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ် အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှ လူသားတွေရဲ့ စည်းဖောက်မှုတွေကြောင့် အခြားသက်ရှိတွေက ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး နေလာကြရတယ် ဒါကြောင့် စုန်းမသုံးယောက်က ကမ္ဘာကြီးကို အသစ်ပြန်ဖန်တီးပြီး လူသားတွေက ကမ္ဘာပေါ်ကနေ ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတော့တယ် အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် သူတို့အနေနဲ့ တိုက်တန်တွေကို ဆင့်ခေါ်ပြီး စကြာဝဠာကြီးရဲ့ဗဟိုမှာ စွမ်းအားတွေ ပေါင်းစည်းရမှာပါ Acadia ကတော့ စကြာဝဠာကြီးရဲ့ဗဟိုမှာရှိတဲ့မြို့လေးပါ အဲ့ဒီမြို့လေးမှာ မှင်စာတွေရယ် ဂြိုလ်သားတွေရယ်နဲ့ စုန်းမတွေကြား ဆက်စပ်နေတဲ့ မှော်အစွမ်းတစ်ခုရှိပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မို့ ကမ္ဘာကြီးကို အသစ်ပြန်လည်ဖန်တီးချင်နေတဲ့ စုန်းမတွေအနေနဲ့ သူတို့အလုပ် အောင်မြင်အောင် လုပ်ဖို့အတွက် ဒီမြို့ကိုလာရပါတယ် Acadia မှာပဲ Trollhunter (မှင်စာမုဆိုး) သူရဲကောင်းအဖွဲ့ဆိုပြီး ရှိပါတယ် Trollhunter အဖွဲ့အနေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို အဆုံးသတ်မယ့် စုန်းမတွေရဲ့အကြံကို သိရှိသွားတဲ့အခါမှာ သူတို့ကို တားဆီးဖို့အတွက် အချင်းချင်း ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲ စုန်းမတွေနဲ့ ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ကြမလဲဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ကြည့်ရှုရမှာပါ ဟာသ၊ ...
IMDB: 7.0/10 1.8K votes
Fear Street: Part Three – 1666 (2021) Unicode Netflix က ထုတ်လွှင့်တဲ့ Fear Street ဇာတ်ကားရဲ့ အပိုင်းသုံးပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ အရင်ကားတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စုန်းမကျိန်စာလို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့ ဆာရာဖီအာရဲ့ သနားစရာ အတိတ်ဇာတ်လမ်းကို ရိုက်ကူးထားပါတယ် ၁၆၆၆ ခုနှစ်မှာ အခြေခံထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ တကယ်ပဲ ဆာရာဖီအာက စုန်းမတစ်ယောက်လား စုန်းမကျိန်စာက တကယ်ရှိတာလားဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ကြည့်ရှုရမှာပါ ပြီးတော့ ဒီအပိုင်းမှာရော ရှက်ဒီဆိုက်ဒ်မြို့ကို ကျိန်စာကနေ ကယ်တင်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုလည်း ကြည့်ရှုဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားကို အညွန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Moh Moh ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi Netflix က ထုတ္လႊင့္တဲ့ Fear Street ဇာတ္ကားရဲ႕ အပိုင္းသုံးပဲျဖစ္ပါတယ္ ဒီဇာတ္ကားမွာေတာ့ အရင္ကားေတြမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စုန္းမက်ိန္စာလို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဆာရာဖီအာရဲ႕ သနားစရာ အတိတ္ဇာတ္လမ္းကို ႐ိုက္ကူးထားပါတယ္ ၁၆၆၆ ခုႏွစ္မွာ အေျခခံထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေတာ့ တကယ္ပဲ ဆာရာဖီအာက စုန္းမတစ္ေယာက္လား စုန္းမက်ိန္စာက တကယ္ရွိတာလားဆိုတာ ဒီဇာတ္ကားထဲမွာ ၾကည့္ရႈရမွာပါ ၿပီးေတာ့ ဒီအပိုင္းမွာေရာ ...
IMDB: 6.7/10 23K votes
Fear Street: Part Two – 1978 (2021) Unicode အရမ်းမိုက်တဲ့ Netflix horror ဇာတ်ကားရဲ့အပိုင်းနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းကတော့… ၁၉၉၄ ခုနှစ် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဆန်နီဗေးလ်နဲ့ ရှိတ်ဒီဆိုဒ်လို့ အမည်ရတဲ့ ဘေးချင်းကပ်မြို့နှစ်မြို့ရှိကြတယ်… ထူးခြားတာက ဆန်နီဗေးလ်ဟာ သာယာဝပြောပြီး စီးပွားဖြစ်သလောက် ရှိတ်ဒီဆိုဒ်ကတော့ စုတ်ပြတ်နုံချာနေပြီး လူသတ်မှုတွေလည်းခဏခဏဖြစ်လေ့ရှိတာပါပဲ… အပိုင်းတစ်မှာတော့ ရှိတ်ဒီဆိုဒ်မြို့ခံချစ်သူစုံတွဲ ဒီနာနဲ့ဆမ်မှာ ဆမ်က ဆန်နီဗေးလ်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ သူတို့လမ်းခွဲကြရာက မထင်မှတ်ထားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကြောင့် သူတို့နောက်ကို လူသတ်သမားတွေလိုက်လာတာကိုရှူစားရမှာဖြစ်ပြီးအခုအပိုင်းနှစ်မှာတော့ ၁၉၇၈ ခုနှစ် နိုက်ဝင်းကမ့်စခန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူသတ်မှုတွေအကြောင်း ပိုထဲထဲဝင်ဝင်ပြသထားတာဖြစ်ပြီး မြို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်း ပိုရုပ်လုံးပေါ်လာတာကို ကြည့်ရှူခံစားရမှာပါအများကြီးပြောပြနေရင် spoil သလိုဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ ကိုယ်တိုင်ပဲဲကြည့်ရှူခံစားကြည့်လိုက်ပါလို့ Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Nyi Nyi ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi အရမ္းမိုက္တဲ့ Netflix horror ဇာတ္ကားရဲ႕အပိုင္းႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္ဇာတ္လမ္းကေတာ့… ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ဆန္နီေဗးလ္နဲ႔ ရွိတ္ဒီဆိုဒ္လို႔ အမည္ရတဲ့ ေဘးခ်င္းကပ္ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ရွိၾကတယ္… ထူးျခားတာက ဆန္နီေဗးလ္ဟာ သာယာဝေျပာၿပီး စီးပြားျဖစ္သေလာက္ ရွိတ္ဒီဆိုဒ္ကေတာ့ စုတ္ျပတ္ႏုံခ်ာေနၿပီး လူသတ္မႈေတြလည္းခဏခဏျဖစ္ေလ့ရွိတာပါပဲ… အပိုင္းတစ္မွာေတာ့ ရွိတ္ဒီဆိုဒ္ၿမိဳ႕ခံခ်စ္သူစုံတြဲ ဒီနာနဲ႔ဆမ္မွာ ဆမ္က ဆန္နီေဗးလ္ကိုေျပာင္းသြားတဲ့ကိစၥနဲ႔ သူတို႔လမ္းခြဲၾကရာက မထင္မွတ္ထားတဲ့ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ သူတို႔ေနာက္ကို လူသတ္သမားေတြလိုက္လာတာကိုရႉစားရမွာျဖစ္ၿပီးအခုအပိုင္းႏွစ္မွာေတာ့ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ႏိုက္ဝင္းကမ့္စခန္းမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူသတ္မႈေတြအေၾကာင္း ပိုထဲထဲဝင္ဝင္ျပသထားတာျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္း ပို႐ုပ္လုံးေပၚလာတာကို ၾကည့္ရႉခံစားရမွာပါအမ်ားႀကီးေျပာျပေနရင္ spoil သလိုျဖစ္သြားမွာစိုးလို႔ ...
IMDB: 6.8/10 32K votes
Jolt (2021) Unicode အမေရိကန်မင်းသမီး Kate Beckinsale အဓိကပါ၀◌င်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အက်ရှင်ဟာသကားလေး Jolt ကိုလည်းရုပ်ရှင်ချစ်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ဇွန် ၃ရက်နေ့ကမှထုတ်လွှင့်ထားတာဆိုတော့အရမ်းလည်းမကြာသေးတဲ့ရုပ်ရှင်ကားသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ လင်ဒီဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာငယ်စဥ◌်ကတည်းကထူးဆန်းတဲ့စွမ်းအင်ကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလင်ဒီအတွက် လက်ဆောင်ကောင်းဆိုတာထက် ဆိုး၀◌ါးတဲ့အပြစ်ဒဏ်တစ်ခုလိုသာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့ပတ်၀◌န်းကျင်ကလူတွေက မတော်မတရားတွေ၊ မကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေကိုလုပ်တဲ့အခါ လင်ဒီဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘဲ ဒေါသကြီးလာပြီး ထိုလူတွေကိုထိခိုက်နာကျင်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လင်ဒီ့မိဘတွေဟာအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ လင်ဒီကိုတစ်ယောက်တည်းဆေးရုံမှာထားပြီး ကုသမှုအမျိုးမျိုးလုပ်ပေးကြပေမယ့် မထိရောက်ခဲ့ပဲပိုပိုပြီးသာ အထိန်းချုပ်မဲ့တဲ့ဒေါသတရားနဲ့ ခွန်အားသာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ စိတ်ကုထုံးဆရာ၀◌န် မွန်ချင်းကလျှပ်စစ်ကိရိယာတစ်မျိုးနဲ့ လင်ဒီကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ အောင်မြင်သလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလျှပ်စစ်ကိရိယာအားကိုးနဲ့လူတွေကြားထဲပြန်၀◌င်ဆံ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့လင်ဒီရဲ့ခြေလှမ်းကတော့ဂျက်စတင်ဆိုတဲ့သူနဲ့ ကြင်ဖက်တွေ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခြင်းမှာကမောက်ကမတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့လင်ဒီဟာ ဂျက်စတင်နဲ့ထပ်တွေ့ဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပေမယ့် ဆရာ၀◌န်မွန်ချင်းရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့် နောက်ထပ်ချိန်းတွေ့မှုအထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ လူတွေကိုကြောက်လန့်ပြီး လူ့လောကအကြောင်းသိပ်မသိတဲ့လင်ဒီဟာ သဘောမနောကောင်းပုံရပြီး လင်ဒီရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံပေးတဲ့ဂျက်စတင်ကို ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာပဲ အချစ်ကြီးချစ်မိသွားပါတော့တယ်။ တတိယအကြိမ်တွေ့ဖို့ချိန်းဆိုမှုအတွက် ကြိုတင် အပျော်လွန်ပြီး ရင်တွေခုန်နေတဲ့လင်ဒီဟာ နောက်တစ်နေ့ညမှာဂျက်စတင်အသတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ရူးမတတ်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ပထမဆုံးချစ်မိတဲ့သူအသတ်ခံလိုက်ရတဲ့လင်ဒီဟာ ဂျက်စတင်ရဲ့သေဆုံးမှုကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်နည်းလမ်းပေါင်းစုံကိုအသုံးပြုတော့တဲ့အခါ... ဒီလိုနဲ့ဂျက်စတင်ရဲ့သေဆုံးမှုနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေဦးမလဲ?? အချစ်ကိုယုံစားမိတဲ့လင်ဒီဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်ရမလဲ??? ဒီဇာတ်ကားအတွက်အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Erika Sean ဖြစ်ပါတယ်။ Zawgyi အေမရိကန္မင္းသမီး Kate Beckinsale အဓိကပါ၀◌င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ အက္ရွင္ဟာသကားေလး Jolt ကိုလည္း႐ုပ္ရွင္ခ်စ္သူတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ၂၀၂၁ ...
IMDB: 5.5/10 6.7K votes
Toofaan (2021) Unicode လက်ဝှေ့ကားတွေကြိုက်တတ်တဲ့ ပရိတ်သက်ကြီအတွက် အိန္ဒိယလက်ဝှေ့ကားလေးတစ်ကား တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ အာဇစ်အာလီက မွတ်ဆလင်မိဘမဲ့ဂေဟာမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့လက်ကိုင်တုတ် အကြွေးတောင်းလူမိုက်ပေါ့။ လက်ဝှေ့ထိုးတာကိုတော့ သူစိတ်ဝင်စားမိတယ်။ လက်ဝှေ့ကို နည်းစနစ်မှန်မှန်နဲ့ထိုးနိုင်ဖို့အတွက် နာနာပရာဘူဆိုတဲ့ နာမည်ကြီးလက်ဝှေ့နည်းပြဆီမှာ သင်ယူခွင့်ရဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။နာနာပရာဘူက မွတ်ဆလင်တွေကိုဆိုရင် အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့သာ မြင်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အာဇစ်ကလည်း လူဆိုးလူမိုက်ဆိုတော့ လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူး။တစ်နေ့တော့ အာဇစ်အာလီ ရန်ဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရလို့ ဆေးရုံလာပြရင်းနဲ့ အန်နန်ရာဆိုတဲ့ဆရာဝန်မလေးနဲ့ဆုံမိသွားကြတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ အန်နန်ရာက လူမိုက်မလို့ကြည့်မရပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အာဇစ်အာလီ လက်ဝှေ့သမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ သူကပဲအားပေးဖေးမခဲ့တယ်။ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားကနေ လက်ဝှေ့သမားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ အာဇစ်အာလီတစ်ယောက် ဘယ်လိုအတားအဆီးတွေကို ကျော်ဖြတ်ရဦးမလဲ၊ ကံကြမ္မာကရော သူ့ကိုမျက်နှာသာပေးပါ့မလား၊ သူ့အိပ်မက်တွေရော တကယ်ဖြစ်လာမှာလားဆိုတာတွေကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်ရှုကြရမှာပါ Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Moe Nandar Aye ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi လက္ေဝွ႔ကားေတြႀကိဳက္တတ္တဲ့ ပရိတ္သက္ႀကီအတြက္ အိႏၵိယလက္ေဝွ႔ကားေလးတစ္ကား တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ အာဇစ္အာလီက မြတ္ဆလင္မိဘမဲ့ေဂဟာမွာႀကီးျပင္းလာတဲ့ သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ကိုင္တုတ္ အေႂကြးေတာင္းလူမိုက္ေပါ့။ လက္ေဝွ႔ထိုးတာကိုေတာ့ သူစိတ္ဝင္စားမိတယ္။ လက္ေဝွ႔ကို နည္းစနစ္မွန္မွန္နဲ႔ထိုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ နာနာပရာဘူဆိုတဲ့ နာမည္ႀကီးလက္ေဝွ႔နည္းျပဆီမွာ သင္ယူခြင့္ရဖို႔ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္။နာနာပရာဘူက မြတ္ဆလင္ေတြကိုဆိုရင္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြလို႔သာ ျမင္တတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အာဇစ္ကလည္း လူဆိုးလူမိုက္ဆိုေတာ့ လြယ္ေတာ့မလြယ္ပါဘူး။တစ္ေန႔ေတာ့ အာဇစ္အာလီ ရန္ျဖစ္ၿပီးဒဏ္ရာရလို႔ ေဆး႐ုံလာျပရင္းနဲ႔ အန္နန္ရာဆိုတဲ့ဆရာဝန္မေလးနဲ႔ဆုံမိသြားၾကတယ္။ အစပိုင္းမွာေတာ့ အန္နန္ရာက လူမိုက္မလို႔ၾကည့္မရေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ...
IMDB: 4.8/10 29k votes
Kingdom: Ashin of the North (2021) Unicode My love from the star နဲ့ Legend of the blue sea ရဲ့ မင်းသမီး၊ မြန်မာပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မင်းသမီး Jun Ji-hyun က အာရှင်ဆိုတဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်နေရာက သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဂျိုဆွန်းပြည်မှာ ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ကတည်းက နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ဂျာချန်လူမျိုးစုဟာ မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းက ကိုယ်ပိုင်မျိုးနွယ်စုဖြစ်တဲ့ ဂျာချန်မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ အပယ်ခံဖြစ်နေပြီး ဂျိုဆွန်းပြည်သူတွေကလည်း လူရာမသွင်းကြတာကို ခံစားခဲ့ရပါတယ် အာရှင်ရဲ့အဖေက ဂျိုဆွန်းတပ်မှူးရဲ့ သစ္စာခံသူလျှိုလုပ်ပေးပြီး သူတို့မျိုးနွယ်စုတွေနေထိုင်တဲ့ရွာလေး တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့အတွက် ကြိုးစားနေတာပါ အာရှင်ရဲ့အမေကတော့ ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရပေမယ့် မျိုးရိုးနိမ့်ကျတဲ့သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာဖြစ်လို့ ဘယ်သမားတော်မှ လာမကုပေးပါဘူး တစ်နေ့မှာတော့ အာရှင်ရဲ့အဖေ မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာ တပ်မှူးခိုင်းတဲ့အလုပ်ကို သွားလုပ်နေတုန်းမှာ သူ့အမေရောဂါပြင်းထန်လာတဲ့အတွက် အာရှင်တစ်ယောက် သူတို့နယ်မြေက တောအုပ်ထဲမှာ ဆေးပင်လိုက်ရှာနေတုန်း သူတို့တစ်ရွာလုံးဖျက်ဆီးခံရပြီး ရွာကလူတွေအားလုံး အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ် တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အာရှင်ရဲ့အဖေဟာ ဟိုဘက်ကမ်းမှာ သူလျှိုလုပ်ပေးရင်း အသတ်ခံလိုက်ရပါတယ် အဲ့လိုနဲ့ အာရှင်တစ်ယောက် သူအဖေရဲ့သေဆုံးမှုနဲ့ သူမျိုးနွယ်တွေရဲ့သေဆုံးမှုအတွက် ...
IMDB: 7.2/10 3.2k votes
The Cursed Lesson (2020) Unicode ဒီကားကတော့ ၂၀၂၀ခုနှစ်နိဝင်ဘာကထွက်ထားတဲ့ Horror ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ Horror ကားထဲမှာတော့ ဇာတ်လမ်းလေးကအရမ်းမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ လောကကြီးမှာ မိန်းကလေးတော်တော်များများက လှပမှုကိုမက်မောကြတယ်။ သင်ရော တစ်ရက်မှာ ရုတ်တရက်ကြီး ရှိရင်းစွဲအသက်ထက်ထက်ဝက်လောက်ငယ်သွားပြီး အရမ်းလှလာမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလှပမှုကိုရဖို့ သင်ဘာမဆို လုပ်မှာလား? ဒီထဲမှာတော့လောဘတွေ၊မနာလိုဝန်တိုမှုတွေနဲ့ အတ္တဆန်မှုတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြထားပြီး သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့အတူ ထိတ်လန့်ဖွယ်ခံစားရမှာပါ။ ဒီကားမှာတော့ Jump Scare တွေထက် တွေးတွေးပြီး ကြောက်ရမယ့်အခန်းလေးတွေပါသလို တွေးတွေးပြီး ကြိုုက်ရမယ့် အခန်လေးတွေလည်း ပါတယ်ဗျ (အဆုံးသတ်က စာလေး ကြည့်လိုက်ရင် သဘောပေါက်ကြမှာပါ) ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဟိုဂျုံးဆိုတဲ့ မော်ဒယ်လ်က အရွယ်ကျလာလို့ ကြော်ငြာရှင်တွေက မသုံးကြတော့ပါဘူး။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တာလည်း မနည်းတာမို့ နောက်ထပ်ခွဲစိတ်မှုတွေ လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာ သူ့အစား ရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့ မော်ဒယ်လ်က သူ့သူငယ်ချင်း ဖြစ်နေပြီး သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ယောဂသင်တန်းတစ်ခု တက်ဖို့ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီယောဂသင်တန်းရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ တက်လိုက်တဲ့လူတိုင်း ရုပ်ရော ကိုယ်ပါ နုပျိုလှပသွားကြတာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတာကေတာ့ .................. အားလုံးပဲ တွေးပြီးကြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ယောကျ်ားလေး ပရိသတ်တော့ ကြောက်မှာထက် ကြိုက်တောင်ကြိုက်မလားပဲ ယောဂကျင့်နည်း အဆန်းလေးတွေလည်း မြင်ရမှာမို့ပါ။ (ဖောင်းဒိုင်းရှူးရှဲ အခန်းတစ်ချို့ ပါတာမို့ ကလေးသူငယ်များ ကြည့်ရှုရန် မသင့်တော်ပါဘူး) Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ May Chit ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဒီကားကေတာ့ ...
IMDB: 4.8/10 90 votes
Pig (2021) Unicode မင်းသားကြီး နီကိုးလပ်စ်ကေ့ဂျ်ရဲ့ ဇာတ်ကားသစ်ပါ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ရော်ဘင်ဆိုတဲ့သူနေရာက သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ရော်ဘင်က တောထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းနေတယ် သူ့မှာ ဝက်မတစ်ကောင်ရှိတယ် ရော်ဘင်ရဲ့ဝက်မက မှိုရှာတာတော်တော့ ရော်ဘင်က မှိုတွေရောင်းစားတယ် ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဝက်မကို တော်တော်ချစ်တယ် တစ်ညမှာတော့ လူတစ်ချို့ရောက်လာပြီး ရော်ဘင့်ကိုရိုက်နှက်ထားခဲ့ပြီး ဝက်မကိုဖမ်းသွားကြတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာ ရော်ဘင်က သူ့ဝက်မကို ပြန်ရှာဖို့ကြိုးစားတယ် လိုက်ရှာရင်းနဲ့ပဲ မြို့ပေါ်ရောက်လာပြီးတော့ ရော်ဘင့်ရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတွေ ပေါ်လာတယ် ရော်ဘင်က အတိတ်ကဘယ်လိုလူလဲဆိုတာရယ် သူ့ဝက်မကို ပြန်ရှာတွေ့ပါ့မလားဆိုတာရယ်ကို ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ဆက်ကြည့်ရမှာပါ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ကိုယ်မွေးထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်အပေါ်မှာထားတဲ့ ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ကိုပါ တွေ့မြင်ရမှာမို့ ကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းပါတယ် ဒီဇာတ်ကားကို အညွန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Moh Moh ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi မင္းသားႀကီး နီကိုးလပ္စ္ေက့ဂ်္ရဲ႕ ဇာတ္ကားသစ္ပါ ဒီဇာတ္ကားထဲမွာ ေရာ္ဘင္ဆိုတဲ့သူေနရာက သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ေရာ္ဘင္က ေတာထဲမွာ တစ္ေယာက္တည္းေနတယ္ သူ႔မွာ ဝက္မတစ္ေကာင္ရွိတယ္ ေရာ္ဘင္ရဲ႕ဝက္မက မႈိရွာတာေတာ္ေတာ့ ေရာ္ဘင္က မႈိေတြေရာင္းစားတယ္ ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဝက္မကို ေတာ္ေတာ္ခ်စ္တယ္ တစ္ညမွာေတာ့ လူတစ္ခ်ိဳ႕ေရာက္လာၿပီး ေရာ္ဘင့္ကို႐ိုက္ႏွက္ထားခဲ့ၿပီး ဝက္မကိုဖမ္းသြားၾကတယ္ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ေရာ္ဘင္က သူ႔ဝက္မကို ျပန္ရွာဖို႔ႀကိဳးစားတယ္ လိုက္ရွာရင္းနဲ႔ပဲ ...
IMDB: 7.0/10 7.6K votes
The Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021) Unicode Ryan Reynolds ( Dead Pool 1 ,2 /Buried / Greenleantum ) မင်းသားကြီး Samuel L. Jackson ( Shaft , Avenger ထဲက Nick Fury ) မင်းသားကြီး The Mask Of Zoro , The Skin I Live In ထဲကမင်းသားကြီး Antonio Banderas နဲ့ အရမ်းသရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့မင်းသမီး Salma Hayek တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ The Hitman’s Wife’s Bodyguard လာပါပြီ…… အရင် Hitman BodyGuardမှာ သောက်ခွက်ပြောင်ခဲ့သလောက် အခု နှစ်ဆသောက်ခွက်ပြောင်ပါတော့မယ် …. မိန်းမနဲ့ ယောက်ျား နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ မင်းသားလေးကိုအနိုင်ကျင့်နိပ်စက်ပါတော့မယ်…. အရင် မစ်ရှင်တစ်ခုမှာ Hitmanကြီးလုပ်လို့ မင်းသားတစ်ယောက် စိတ်ကုထုံးတွေကု ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုထိရောက်သွားပါတယ်…. အဲဒါကြောင့် သူဟာ ...
IMDB: 6.2/10 24K votes
Midnight in the Switchgrass (2021) Unicode Midnight In The Switchgrass ဆိုတဲ့ Mystery, Thriller & Crime Movie ကို ၂၀၂၁၊ ဂျူလိုင် ၂၃ရက်နေ့မှာစတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကိုThriller ရုပ်ရှင်အများစုရဲ့သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်မင်းသမီးချော Megan Fox ကဦးဆောင်ပြီး Emile Hirsch, Lucas Hass, Bruce Willis စတဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းတွေနဲ့တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ရေဘက္ကာလွန်ဘာဒိုနဲ့ သူ့ရဲ့တွဲဖက်ကားလ်ဟာ FBI ကစုံထောက်တွေဖြစ်ကြပြီး သူတို့ဟာမိန်းကလေးတွေထူးဆန်းစွာအသတ်ခံရတဲ့ကွင်းဆက်လူသတ်မှုတစ်ခုကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်းနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ဘရိုင်ယန်ခရောဖို့ဒ်ဆိုတဲ့ပြည်နယ်ရဲစုံထောက်တစ်ယောက်ဟာလည်း ရဲဌာနကိုလူပျောက်တိုင်လာတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးခြင်းအကြောင်းကိုစုံစမ်းရာက ဒီကွင်းဆက်လူသတ်မှုကိုရိပ်မိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အထက်အရာရှိတွေရဲ့တားမြစ်ခြင်းကိုခံရတဲ့ဘရိုင်ယန်ဟာ သူလုပ်ချင်သလို အမှုကိုထောက်လှမ်းလို့မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့လိုပဲ ဒီကွင်းဆက်လူသတ်မှုအကြောင်းကိုအရမ်းစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ လွန်ဘာဒိုနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါ သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး သံသယရှိတဲ့တရားခံကိုပိုပြီးနောက်ယောင်ခံလိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ လွန်ဘာဒိုနဲ့ဘရိုင်ယန်ဟာ ထူးထူးဆန်းဆန်းအသတ်ခံခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက် တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေပေးနိုင်မလား... စိတ္တဇကွင်းဆက်လူသတ်သမားရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကနေဘယ်လိုရုန်းထွက်ကြမလဲဆိုတာကတော့စိတ်၀◌င်စားစရာပါပဲ။ ဒီရုပ်ရှင်ကို စကားအသုံးအနှုန်းနဲ့ အချို့ဇာတ်ကွက်များအတွက်သတိပေးထားတာဖြစ်လို့ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးသူငယ်များကြည့်ရှုရန်မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒီရုပ်ရှင်အတွက်ဘာသာပြန်နဲ့ အညွှန်းရေးပေးတဲ့သူကတော့ Erika Sean ဖြစ်ပါတယ်။ Zawgyi Midnight In The Switchgrass ဆိုတဲ့ Mystery, ...
IMDB: 4.4/10 195 votes
Die inaGunfight (2021) Unicode ဂစ်ဘွန်နဲ့ရက်ကာ့တို့မိသားစုနှစ်စုဟာ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ရန်ဖက်တွေဖြစ်လာကြတဲ့သူတွေပါ ဒါပေမယ့်လည်းရိုမီယို ဂျူးလိယက်ဇာတ်လမ်းလို သူတို့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့မယ်ရီနဲ့ ဘန်ဂျမင်တို့ကတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ကြိုက်နေကြပါတယ်မယ်ရီရဲ့အဖေဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခွဲဖို့အတွက် မယ်ရီကိုပဲရစ်မှာပညာသင်ကြားဖို့လွှတ်လိုက်ပါတယ် မယ်ရီနဲ့ ဘန်ဂျမင်တို့ကွဲကွာသွားခဲ့ပေမယ့်လည်း သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ကတော့ ပျောက်မသွားခဲ့ပါဘူး ဒီလိုနဲ့မယ်ရီပဲရစ်ကနေ ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါသူတို့အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး ပြန်ပြီးအသက်ဝင်လာပါတော့တယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ သူတို့အချစ်ကအနိုင်ရသွားမလား ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားရဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် လူငယ်ဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားလေးဖြစ်လို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ May Chit ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဂစ္ဘြန္နဲ႔ရက္ကာ့တို႔မိသားစုႏွစ္စုဟာ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ရန္ဖက္ေတြျဖစ္လာၾကတဲ့သူေတြပါ ဒါေပမယ့္လည္း႐ိုမီယို ဂ်ဴးလိယက္ဇာတ္လမ္းလို သူတို႔သားသမီးေတြျဖစ္တဲ့မယ္ရီနဲ႔ ဘန္ဂ်မင္တို႔ကေတာ့တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ခ်စ္ႀကိဳက္ေနၾကပါတယ္မယ္ရီရဲ႕အေဖဟာသူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကိုခြဲဖို႔အတြက္ မယ္ရီကိုပဲရစ္မွာပညာသင္ၾကားဖို႔လႊတ္လိုက္ပါတယ္ မယ္ရီနဲ႔ ဘန္ဂ်မင္တို႔ကြဲကြာသြားခဲ့ေပမယ့္လည္း သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အခ်စ္ကေတာ့ ေပ်ာက္မသြားခဲ့ပါဘူး ဒီလိုနဲ႔မယ္ရီပဲရစ္ကေန ျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါသူတို႔အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလး ျပန္ၿပီးအသက္ဝင္လာပါေတာ့တယ္ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ သူတို႔အခ်စ္ကအႏိုင္ရသြားမလား ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြကိုေက်ာ္လႊားရဦးမလဲဆိုတာကိုေတာ့ဇာတ္လမ္းထဲမွာဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါဦးေနာ္ လူငယ္ဆန္ဆန္႐ိုက္ကူးထားတဲ့ကားေလးျဖစ္လို႔ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးၾကည့္ရႈရမယ့္ ဇာတ္ကားေကာင္းေလးတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္ Credit Review ဒီဇာတ္ကားကိုဘာသာျပန္ေပးသူကေတာ့ May Chit ျဖစ္ပါတယ္
IMDB: 4.4/10 656 votes
The Forever Purge (2021) Unicode အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သန့်စင်ရေးနေ့ဆိုပြီး တစ်ရက်ခွင့်ပြုပေးထားတယ် အဲ့ဒီနေ့မှာ လူပဲသတ်သတ် ဘာရာဇဝတ်မှုပဲလုပ်လုပ် အရေးမယူပါဘူး ကြိုက်တာလုပ်လို့ရပါတယ် နောက်တစ်နေ့ရောက်သွားရင်တော့ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ပတ်ကြတာပေါ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လူမျိုးရေးပြဿနာတွေတင်းမာလာတော့ အခြားနိုင်ငံက လာရောက်နေထိုင်သူတွေကို အစွန်းရောက်မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အလိုမရှိကြပါဘူး ဒီတော့ သန့်စင်ရေးနေ့မှာ လူဖြူမဟုတ်တဲ့ အခြားလူမျိုးတွေကို အဓိကထားသုတ်သင်လာကြပါတယ် ဒီနှစ်သန့်စင်ရေးနေ့မှာတော့ အစွန်းရောက်မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေက နိုင်ငံကို အမေရိကန်သွေးစစ်စစ်တွေပဲ သန့်စင်မယ်လို့ ကြွေးကြော်ကြပြီး တစ်ရက်နဲ့မရောင့်ရဲနိုင်ဘဲနဲ့ ထာဝရသန့်စင်ရေးအဖြစ် အသက်သွင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ မက္ကဆီကိုလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ ဂျူအန်နဲ့အဒေလာတို့အပြင် အခြားမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ လွတ်မြောက်အောင် ရုန်းကန်ကြရပါတော့တယ် အဲ့ဒီလိုအစွန်းရောက်လူသတ်ကောင်တွေလက်ထဲကနေ မက္ကဆီကိုလူမျိုးတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင် ရုန်းထွက်ကြမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ကြည့်ရမှာပါ ဒီဇာတ်ကားကိုအညွန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Moh Moh ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕အစိုးရအသစ္လက္ထက္မွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း သန႔္စင္ေရးေန႔ဆိုၿပီး တစ္ရက္ခြင့္ျပဳေပးထားတယ္ အဲ့ဒီေန႔မွာ လူပဲသတ္သတ္ ဘာရာဇဝတ္မႈပဲလုပ္လုပ္ အေရးမယူပါဘူး ႀကိဳက္တာလုပ္လို႔ရပါတယ္ ေနာက္တစ္ေန႔ေရာက္သြားရင္ေတာ့ ပုံမွန္အတိုင္း ျပန္လည္ပတ္ၾကတာေပါ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာေတြတင္းမာလာေတာ့ အျခားႏိုင္ငံက လာေရာက္ေနထိုင္သူေတြကို အစြန္းေရာက္မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ေတြက အလိုမရွိၾကပါဘူး ဒီေတာ့ သန႔္စင္ေရးေန႔မွာ လူျဖဴမဟုတ္တဲ့ အျခားလူမ်ိဳးေတြကို အဓိကထားသုတ္သင္လာၾကပါတယ္ ဒီႏွစ္သန႔္စင္ေရးေန႔မွာေတာ့ အစြန္းေရာက္မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ေတြက ႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ေသြးစစ္စစ္ေတြပဲ သန႔္စင္မယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ၾကၿပီး တစ္ရက္နဲ႔မေရာင့္ရဲႏိုင္ဘဲနဲ႔ ထာဝရသန႔္စင္ေရးအျဖစ္ အသက္သြင္းလာတဲ့အခါမွာေတာ့ မကၠဆီကိုလူမ်ိဳးေတြျဖစ္တဲ့ ဂ်ဴအန္နဲ႔အေဒလာတို႔အျပင္ အျခားမိတ္ေဆြေတြအေနနဲ႔ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႐ုန္းကန္ၾကရပါေတာ့တယ္ အဲ့ဒီလိုအစြန္းေရာက္လူသတ္ေကာင္ေတြလက္ထဲကေန ...
Space Jam: A New Legacy (2021) Unicode ဘတ်စကက်ဘောအားကစားပရိတ်သက်များအကြိုက်တွေ့စေမယ့်ဇာတ်ကားလေးကိုဒီတစ်ခါမှာမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဘတ်စကက်ဘောလောကရဲ့ဘုရင် LeBron James ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့ Space Jam A New Legacy ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါပဲ။ ဒီ American Live action & Animated Sport Comedy ဇာတ်ကားလေးကို ၂၀၂၁ ဇူလိုင်လ ၁၄ရက်နေ့ကမှထွက်ထားတာကြောင့် ပူပူနွေးနွေးအသစ်စက်စက်လေးပါနော်။ ငယ်စဥ◌်ကချို့တဲ့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူနဲ့သာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ LeBron James ဟာလူငယ်ဘ၀ရဲ့အပျော်အပါးအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ပြီး နည်းပြရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အထိတစ်စိုက်မတ်မတ်ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။ ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲထိုက်တန်တဲ့ မရေတွက်နိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စူပါစတားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူ ဇနီးဖြစ်သူကာမီယာနဲ့သားလေးနှစ်ယောက်၊ သမီးလေးတစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သားကြီးဖြစ်သူဒယ်ရီးယက်စ်ကဖခင်လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဘတ်စကက်အားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပေမယ့် သားငယ်ဒွန်မ်မစ်နစ်ကတော့ဂိမ်းဖန်တီးခြင်းကိုသာပိုပြီး စိတ်၀◌င်စားခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖခင်လစ်ဘရွန်နဲ့ သားငယ်ဒွန်မ်မစ်နစ်တို့ကြားထဲမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့အခြေအတင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုသားအဖဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတဲ့အချိန် ထူးဆန်းတဲ့အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီး ကွန်ပျူတာဆာဗာထဲကိုသားအဖနှစ်ယောက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ...ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ?? ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့သားငယ်အပေါ်တစ်လွဲစေတနာတွေနဲ့ သားငယ်ရဲ့ခေါင်းမာမှုတွေကို ဘယ်လိုအဖြစ်အပျက်တွေကအမြင်မှန်တွေရစေမလဲ...? ဒါ့အပြင်ကျွန်မတို့ငယ်စဥ◌်ကအိပ်ယာ၀◌င် Comic တွေရဲ့ဇာတ်ကောင်လေးတွေဖြစ်တဲ့ Bugs Bunny ဦးဆောင်တဲ့ Looney Tunes လေးတို့ပါပါလာမယ်ဆိုတော့...လုံး၀ကိုလက်မလွှတ်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်နေပါပြီနော်။ ဒီဇာတ်ကားကိုအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Erica Sean ဖြစ်ပါတယ်။ Zawgyi ဘတ္စကက္ေဘာအားကစားပရိတ္သက္မ်ားအႀကိဳက္ေတြ႕ေစမယ့္ဇာတ္ကားေလးကိုဒီတစ္ခါမွာမိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဘတ္စကက္ေဘာေလာကရဲ႕ဘုရင္ LeBron James ကိုယ္တိုင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ဇာတ္ကားေလးျဖစ္တဲ့ Space ...
IMDB: 4.3/10 21k votes
Young Adult Matters (2020) Unicode တောင်ကိုရီးယားဒရမ်မာတွေ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ၊ တေးသီချင်းတွေနဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့ကျွန်မတို့က တောင်ကိုရီးယားလူ့ပတ်၀◌န်းကျင်အပေါ်ဘယ်လိုအမြင်ရှိကြသလဲ? ကျွန်မတို့ထက်တိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့လူမှုပတ်၀◌န်းကျင်ကို အနည်းနဲ့အများတော့အထင်ကြီးအကောင်းမြင်ကြတာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တောင်ကိုရီးယားဒါရိုက်တာ Lee Hwan က Young Adult Matters ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ ယခုခေတ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေကြားကအဖြစ်အပျက်တွေကို ပုံရိပ်ထင်အောင်တင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယွန်းဆယ်ဂျင်းဆိုတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသူတစ်ယောက်ဟာ ညီမဖြစ်သူယွန်းဆယ်ယောင်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေထိုင်ကြပါတယ်။ ယွန်းဆယ်ဂျင်းဟာတစ်ခါတစ်ရံမှာ သူ့ရဲ့လက်ကိုဓားနဲ့လှီးတတ်ပြီး sociopath တစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူတွေရှိ၍ မူးယစ်ဆေးလဲစွဲနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာကျောင်းမှာလည်းအတန်းဖော်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ LGBT relationship ရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ဂျင်းရဲ့ LGBT ချစ်သူဟာဆယ်ဂျင်းကိုအခြားသူတွေရှေ့မှာအနိုင်ကျင့်တတ်ပါတယ်။ Sociaopath တစ်ယောက်ဖြစ်ဟန်ရှိတဲ့ယွန်းဆယ်ဂျင်းဟာ သူတို့ကျောင်းကကျောင်းအုပ်ရဲ့သားနဲ့ကိုယ်၀◌န်ရခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ဟာကိုယ်၀◌န်ဖျက်ချဖို့နဲ့ ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပြောဖို့ဆယ်ဂျင်းကိုစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဆယ်ဂျင်းရဲ့ LGBT ချစ်သူဟာလည်းထိုကိုယ်၀◌န်ကိစ္စနဲ့ဆယ်ဂျင်းကိုအပြစ်ပြောရိုက်နှက်ခဲ့ပြီး ထိုညမှာပဲသူဟာဆယ်ဂျင်းမျက်စိရှေ့မှာ ကြောက်မက်ဖွယ်အဖြစ်ဆိုးနဲ့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ထိုအဖြစ်တွေကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ဆယ်ဂျင်းဟာ ကိုယ်၀◌န်ဖျက်ချဖို့အကြောင်းပြချက်နဲ့အိမ်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ပြီး လမ်းမှာသူ့လိုပဲအသက်ရွယ်တူအိမ်ပြေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျူယောင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ပိုမိုပြီးသူငယ်ချင်းသံယောဇဥ◌်နက်ရှိုင်းလာခဲ့တဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ဟာ ဆယ်ဂျင်းရဲ့ကိုယ်၀◌န်ကိုဖျက်ချဖို့နည်းလမ်းပေါင်းစုံရှာကြပါတော့တဲ့အခါ… ဘက်ပေါင်းစုံကနေပျက်စီးချင်တိုင်းပျက်စီးနေတဲ့ဆယ်ဂျင်းနဲ့ဂျူယောင်း ဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့ရမလဲ? သူတို့တွေရဲ့ခံစားချက်တွေ၊ နောက်ကွယ်ကအတိတ်အကြောင်းပြချက်တွေကဘာလဲ…? ကျောင်းတွင်းအနိုင်ကျင့်မှု၊ လူငယ်တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်မှု ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ်ဖြစ်နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀◌ိုင်းကိုထင်ဟပ်အောင်ရိုက်ပြထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ မူးယစ်ဆေး၀◌ါးဆိုင်ရာနဲ့ အခြားကြမ်းတမ်းသောစကားအသုံးအနှုန်း၊ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်များပါတာကြောင့်အသက်မပြည့်သေးသောကလေးများကြည့်ရှုရန်မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒီဇာတ်ကားအတွက် အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးတာကတော့ Erika Sean ...
Pawn (2020) Unicode ငွေချေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်တဲ့ လူနှစ်ယောက်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆီကနေပြီး ချေးထားတဲ့ငွေကို ပြန်တောင်းဖို့သွားကြတဲ့အခါ ထိုအမျိုးသမီးကချေးထားတဲ့ ငွေကို ပြန်မဆပ်နိုင်တာကြောင့် သူ့ရဲ့သမီးလေးကို အပေါင်အဖြစ်ခေါ်ယူလာခဲ့ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ မိခင်က တရားမဝင်နေထိုင်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်မိမိနေရပ်ကို ပြန်ပို့ခံရပြီး ကလေးကိုတော့ ငွေချေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေဆီ ထားခဲ့ရပါတော့တယ်။ ကလေးကိုသမီးအဖြစ်မွေးခဲ့တဲ့ ပက်ဒူဆော့နဲ့ ဂျောင်ဘဲ့ နှစ်ယောက်နဲ့ ကလေးမလေးနဲ့ အတူတူနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ ပက်ဒူဆော့ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်ဟာ ရုတ်တရက်ပျောက်သွားခဲ့ပြီး ၁၀နှစ်ကျော်တဲ့ထိ ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး မွေးထားခဲ့တဲ့ ကလေးမလေးနဲ့ ဦးလေးဂျောင်ဘဲ့ နဲ့ နှစ်ယောက် လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပေမယ့် ၁၀နှစ်ကျော်တဲ့အထိ လုံးဝရှာမတွေ့ဘဲဖြစ်နေပါတယ် ပက်ဒူဆော့ဟာဘာကြောင့်ပျောက်သွားခဲ့တာလဲ သူတို့ကရော ပြန်လည်ရှာတွေ့နိုင်မှာလား ငွေချေးသမားနှစ်ယောက်နဲ့ ကလေးမလေးတို့ကြညးားက သံယောဇဉ်ကို ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ် ကြည့်ရှုခံစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Mia Mina ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ေငြေခ်းလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္တဲ့ လူႏွစ္ေယာက္က အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဆီကေနၿပီး ေခ်းထားတဲ့ေငြကို ျပန္ေတာင္းဖို႔သြားၾကတဲ့အခါ ထိုအမ်ိဳးသမီးကေခ်းထားတဲ့ ေငြကို ျပန္မဆပ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕သမီးေလးကို အေပါင္အျဖစ္ေခၚယူလာခဲ့ပါတယ္။ ကေလးရဲ႕ ...
IMDB: 7.5/10 478 votes
Black Widow (2021) Unicode Marval ကာတွန်းကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ Super Hero ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပါ Marvel က ထုတ်တဲ့ကားတွေအားလုံးက အလန်းစားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် လက်မလွှတ်တမ်း ကြည့်သင့်တဲ့ကားကောင်းတစ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ် Black Widow အဖြစ် မင်းသမီး စကားလက်ဂျိုဟန်ဆန်က သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ Black Widow ရဲ့ ငယ်ဘဝနဲ့ သူ့ကိုလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တွေ့မြင်ရမှာပါ Black Widow အဖြစ် လေ့ကျင့်ပေးခံရတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းက ထိန်းချုပ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီး အာဏာအတွက် အသုံးချနေတာကို သိရတဲ့အခါမှာတော့ မင်းသမီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ဆက်ကြည့်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားမှာ Black Widow အကြောင်းကိုပဲ အဓိကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် လူစွမ်းကောင်းကားတွေကို အခုမှစကြည့်မယ့်သူတွေအတွက်တော့ ဇာတ်ကောင်တွေမှတ်ရတာမများလို့ ကြည့်ဖို့ အဆင်ပြေကြောင်း ညွှန်းချင်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Moh Moh ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi Marval ကာတြန္းကို အေျခခံၿပီး ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ Super Hero ဇာတ္လမ္းတစ္ခုပါ Marvel ...
IMDB: 7.0/10 10k votes
A Millionaire on the Run (2012) Unicode J Y Park ရဲ့ 2012 ထွက်ဟာသဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်တဲ့ A Millionaire on the Run ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ imdb 5.8 အထိရှိပီး ဇာတ်လမ်းအညွန်းအနေနဲ့တော့ Choi Yeong-in (J Y Park) က သူ့ကောလိပ်ငယ်သူချင်းဖြစ်တဲ့ Seung-dae ကသူတို့ Boss ရဲ့ မကောင်းတဲ့အတွင်းရေး ကိစ္စတွေပြောပြတာနားထောင်မိပီး လူဆိုးဂိုဏ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်မိရာကနေ အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်လာတဲ့ ဟာသ ဒရမ်မာကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Nyi Nyi ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi J Y Park ရဲ႕ 2012 ထြက္ဟာသဇာတ္ကားေကာင္းျဖစ္တဲ့ A Millionaire on the Run ကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ imdb 5.8 အထိရွိပီး ဇာတ္လမ္းအၫြန္းအေနနဲ႔ေတာ့ Choi Yeong-in (J Y Park) က သူ႔ေကာလိပ္ငယ္သူခ်င္းျဖစ္တဲ့ ...
IMDB: 5.8/10 8.2 votes
Wolfwalkers (2020) Unicode ၁၆၅၀ ခုနှစ်၊ အိုင်ယာလန်မှာ အင်္ဂလိပ်တွေ နယ်မြေချဲ့လာတဲ့အချိန်တုန်းက အင်္ဂလန်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ ရော်ဘင်နဲ့ သူ့အဖေ အမဲလိုက်မုဆိုးကြီးက အိုင်ယာလန်ကို ပြောင်းလာကြတယ် အဲ့ဒီမြို့က မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့တောအုပ်ထဲမှာ ဝံပုလွေတွေ အများကြီးရှိတဲ့အတွက် မြို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဘယ်ကလေးမှ မြို့ပြင်မထွက်ရဘူးလို့ စည်းကမ်းတင်းကျပ်ထားတယ် ပြီးတော့ ရော်ဘင့်ရဲ့အဖေကို မြို့ပြင်မှာရှိတဲ့တောအုပ်ထဲမှာ ဝံပုလွေတွေနှိမ်နှင်းပေးဖို့ တာဝန်ပေးခဲ့တယ် ရော်ဘင်က အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ဖို့ထက် အပြင်လောကမှာ စွန့်စားခန်းတွေ ရှာဖွေချင်တဲ့ မိန်းကလေးငယ်လေးပါ ဒါပေမယ့် သူ့အဖေက ရော်ဘင့်ကို အဲ့ဒီဒေသက အခြားကလေးတွေလိုပဲ အိမ်မှာပဲနေပြီး အိမ်မှုကိစ္စကိုပဲ စိတ်ဝင်စားဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့တယ် တစ်နေ့မှာတော့ ရောဘင်က သူ့အဖေမသိအောင် စစ်သားတွေစောင့်ကြပ်ထားတဲ့ကြားက မြို့ပြင်ကို ခိုးထွက်လာပြီး သူ့အဖေ အမဲလိုက်သွားတဲ့နောက်ကို ခိုးလိုက်တဲ့တယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ မြို့ကလူတွေပါးစပ်ဖျားမှာ ဒဏ္ဍာရီလိုမျိုးပြောနေကြတဲ့ ဝံပုလွေလူသား ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့ပြီး သူငယ်ချင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် ရော်ဘင် မြို့ပြင်ခိုးထွက်တာကို သူ့အဖေသိသွားတဲ့အခါမှာတော့ အရင်ကထက် စည်းကမ်းတွေ ပိုတင်းကျပ်လာခဲ့တယ် နောက်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဝံပုလွေတွေအားလုံးကို နှိမ်နှင်းဖို့ တောအုပ်ကို မီးရှို့တော့မယ်ဆိုတာ ...
IMDB: 8.1/10 23K votes
Dynasty Warriors (2021) Unicode ဇာတ်ကားအစမှာ ဟန်နိုင်ငံတော်ရဲ့အမတ်စစ်သူကြီးဒုံကျိုး နဲ့ ရန်သူတွေရဲ့စစ်ပွဲနဲ့စတင်ထားပြီး ဟန်နိုင်ငံရဲ့အရေးမို့ လျို့ပေ, ကွမ်ယု, ကျန့်ဖေးတို့ သွေးသောက်ညီအကိုသုံးယောက်ဟာ ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဒုံကျိူးက ဘုရင်ငယ်ကိုအသုံးချပြီး နန်းတော်ထဲမှာ သူလုပ်ချင်တိုင်းထင်ရာစိုင်းဖို့အာဏာလုခဲ့ပြီး သူပြောတာလက်မခံတဲ့သူမှန်သမျှသတ်စေခဲ့ပါတယ် ဒုန်ကျိူးကိုချေမှုန်းချင်တဲ့ မဟာမိတ်တပ် စစ်သည်၁၈ ယောက်ဟာ စုစည်းပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ် ဒုန်ကျိုးဘက်မှာလဲ ပြိုင်ဘက်ကင်းစစ်သည်တွေရှိတာကြောင့် ဘယ်သူနိုင်သွားမလဲ ဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာ တရုတ်သိုင်းကားကြိုက်တဲ့သူတွေ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလို့ရပါပြီခင်ဗျာ ဒီဇာတ်ကားကို အညွန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ JJ ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဇာတ္ကားအစမွာ ဟန္ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အမတ္စစ္သူႀကီးဒုံက်ိဳး နဲ႔ ရန္သူေတြရဲ႕စစ္ပြဲနဲ႔စတင္ထားၿပီး ဟန္ႏိုင္ငံရဲ႕အေရးမို႔ လ်ိဳ႕ေပ, ကြမ္ယု, က်န႔္ေဖးတို႔ ေသြးေသာက္ညီအကိုသုံးေယာက္ဟာ ကူညီတိုက္ခိုက္ေပးခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ဒုံက်ိဴးက ဘုရင္ငယ္ကိုအသုံးခ်ၿပီး နန္းေတာ္ထဲမွာ သူလုပ္ခ်င္တိုင္းထင္ရာစိုင္းဖို႔အာဏာလုခဲ့ၿပီး သူေျပာတာလက္မခံတဲ့သူမွန္သမွ်သတ္ေစခဲ့ပါတယ္ ဒုန္က်ိဴးကိုေခ်မႈန္းခ်င္တဲ့ မဟာမိတ္တပ္ စစ္သည္၁၈ ေယာက္ဟာ စုစည္းၿပီး တိုက္ခိုက္ဖို႔ျပင္ဆင္ပါေတာ့တယ္ ဒုန္က်ိဳးဘက္မွာလဲ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းစစ္သည္ေတြရွိတာေၾကာင့္ ဘယ္သူႏိုင္သြားမလဲ ဘာေတြဆက္ျဖစ္သြားမလဲဆိုတာ တ႐ုတ္သိုင္းကားႀကိဳက္တဲ့သူေတြ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈလို႔ရပါၿပီခင္ဗ်ာ ဒီဇာတ္ကားကို အၫြန္းနဲ႔ဘာသာျပန္ေပးသူကေတာ့ JJ ျဖစ္ပါတယ္
IMDB: 4.8/10 938 votes